नेपाली केन्द्रिय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्धालय -
मैले सुनेको छु रसुवा जिल्लामा १५ प्रतिसत बाहुन/छेत्री, ८२ प्रतिसत तामाङ र केहि मात्रामा नेवारी समुदायको पनि बसोबास रहेको छ । रसुवा जिल्लामा २०७४ साल मंसिर १० गते हुने संघीय अर्थात् प्रतिनिधि सभाको निम्ति एउटा र प्रदेश सभाको निम्ति दुईवटा चुनावी क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । १५ प्रतिसत बाहुन/छेत्री भएको ठाउँमा संघीय अर्थात् प्रतिनिधि सभामा नेपाली काँग्रेस र एमाले दुवै पार्टीले बाहुन/छेत्रीलाई नै उमेद्वार उठाइदै छ यो शोषण हो । सोझो अर्थमा भन्दा ८२ प्रतिसत तामाङहरूको लागि ठाडै अपमान गरिनु हो । रसुवावासी आमा, आपा, ज्योज्यो आले, नाना आङा जसरी हामी तामाङ समुदायले एक भएर बुद्ध लामालाई नेपाल आइडलमा जिताउन सफल भयौँ २०७४ मंसिर १० गते हुने संघीय र प्रादेशिक चुनावमा बाहुन/छेत्रीलाई हैन तामाङ समुदायको उमेद्वारलाई नै भोट दिएर जिताउनु पर्छ । तामाङको मर्म तामाङले बुझ्छ बाहुन/छेत्रीले हैन । रसुवा जिल्लाको हामी तामाङ समुदायलाई यो १५ प्रतिसत बाहुन/छेत्रीले भोट बैंक मात्र बनाएको छ । यसको जवाफमा तपाईंहरूले २०७४ मंसिर १० गते हुने संघीय र प्रादेशिक चुनावमा रसुवाबाट उठ्ने युवा पुस्ता तामाङ तामाङ समुदायको उम्मेदवारलाई आफ्नो अमुल्य मत दिएर एक हुनुहोस् । रसुवावासी तामाङ समुदायको एकता देखेर अन्य जिल्लाका तामाङहरूलाई पनि एक हुन प्रेरणा मिलोस् कामना ! । तामाङ समुदायको एकताको नाममा नेपाली कांग्रेश, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी (केन्द्र) र कथित नयाँ शक्ति पार्टीको उम्मेदवारहरूलाई भोट दिएर हामी तामाङ समुदायको युवाले गल्ति गर्नु हुँदैन । नेपाली कांग्रेश, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी (केन्द्र) र कथित नयाँ शक्ति पार्टीको टाउके नेताहरू सबै बाहुनहरु भएकोले यी पार्टीको तामाङ उम्मेदवारहरूलाई भोट दिनु भनेको फेरी पनि बाहुन उम्मेदवारलाई नै भोट दिनु हुनेछ । २०७४ मंसिर १० गते हुने संघीय र प्रादेशिक चुनावमा हामीले तामाङ युवाहरूले विगतमा गरेको गल्ति दोहोर्‍याउनु हुदैन ।
राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र शैक्षिक लगायत विविध कोणबाट तामाङ समुदायलाई पछि पार्ने काम विगत देखि वर्तमान समय सम्म बाहुनहरूले गरिरहेका छन् । यसको बिरोधमा तामाङ समुदायका युवाहरूले पटक-पटक बाहुनहरूको विरुद्ध विद्रोह गरिरहेका छन् । यसले तामाङ समुदाय आफ्नो जाति, धर्म, संस्कार, रीति र परम्पराको रक्षाको निम्ति कसैदेखि डग्दैन र डराउँदैन भन्ने देखाउँछ । यहि चेतना तामाङ समुदायको सवै युवा पुस्तामा आउने हो भने तामाङ समुदायले आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन । हेर्नुस् हाम्रै अनुहारका चीन, जापान, उत्तर वा दक्षिण कोरिया कति अगाडि पुगेका छन् । नेपाल देश र हामी तामाङ समुदाय पनि त्यो अवस्थामा पुग्न सक्दैनौ भन्ने होइन समग्र तामाङ एक भयो भने हामी प्रगतिको मार्गमा अगाडि बढ्न सक्छौ भन्ने लाग्छ । बुद्ध लामालाई आज यति फरक मतले विजय गराउन सफल तामाङ समुदाय नेपाली राजनीतिमा पनि एक भएर फरक मत देखाइदिनु पर्छ । ८२ प्रतिसत तामाङ समुदाय बसोबास गरेको ठाउँ रसुवामा किन राम्रो विकास हुन सकेन? भन्ने प्रश्नमा बाहुनहरूले आजको दिन सम्म रसुवाको तामाङ समुदाय माथि गर्ने गरेको सोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार र हाली मुहालीले गर्दा हो भन्ने लाग्छ । शिक्षा र राजनीतिको मूलधारबाट तामाङ समुदायलाई निकालियो अनि सदियौं सम्म ढोके, पाले र पिपा मात्र बनाए राखियो । आज पनि त्यसको असर देखिदै छ । लेखक अमृत योञ्जन तामाङको एक लेख पढेको थिएँ “शिक्षामा तामाङहरू ५८औँ स्थानमा” भनेर । यति तल तामाङहरू खस्नुको प्रमुख कारण सामन्ती राज्य सत्ताले तामाङ समुदायलाई मासिन्या जातको सूचिमा राख्यो । शिक्षा लिन र पढ्नमा बञ्चित गरायो । आज पनि ताम्सालिङ क्षेत्रमा भोटेको छोरा पढेर के गर्छस् ? भन्ने बाहुनहरू थुप्रै देखेको, सुनेको छु । हामी तामाङहरूलाई पढ्न हुन्न भन्ने मानसिक दवाव बाहुनहरूबाट प्रशस्त भएको देखिन्छ र पाइन्छ । यसको मुख्य कारण भनेको तामाङहरु शिक्षित भए भने बाहुनले शोषण गर्ने बाटो बन्द हुन्छ भनेर तामाङ समुदायको बालबालिका हरूलाई आज पनि पढ्नबाट रोक्न विभिन्न बहाना अपनाउने गरेको पाइन्छ ।
रसुवामा कृष्ण बहादुर तामाङ नै किन?
सामन्ती राज्य सत्ताले हामी तामाङ समुदायलाई पुस्तौपुस्ता देखि (बिक्रम सम्बत १७९९ को नुवाकोट हमला देखि) आज सम्म दासको रूपमा राखेको छ । पृथ्वीनारायण शाहाको पहिलो पराजय तामाङबाट नै भएको कारण सम्पूर्ण तामाङहरूलाई कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरि मानसिक बन्चरोले प्रहार गरेको छ । त्यसको बाबजुत पनि तामाङ समुदाय समय समयमा होसमा आउने र सामन्ती राज्य सत्ता माथि हवाला दिदै आएको छ । त्यस्तै व्यक्ति मध्यको एक हुन् श्री कृष्ण बहादुर तामाङ । आफ्नो समुदाय माथि भएको अन्यायको विरूद्ध निडर भएर लड्न सक्ने तत्कालीन १० वर्षे जनयुद्धको समयमा स्पष्ट विचार र दृष्टिकोण व्यक्त गरेकै कारण कठोर सजाय र जेल जीवन बिताएका प्रखर र स्पष्टवादी नेता हुन् कृष्ण बहादुर तामाङ । २०७४ मंसिर १० गते हुने संघीय निर्वाचनमा रसुवा जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उनको उमेद्वारी हुनै पर्ने देखिन्छ । रसुवामा ८२ प्रतिसत तामाङहरुलाई १५ प्रतिसत बाहुन/छेत्रीहरूले लामोसमय देखि सोषण गरि रहेकोछ । शिक्षा प्रेमी, जाति प्रेमी र पूर्खाहरूको सम्मानमा कुनै कसर नराख्ने सामन्ती राज्य सत्तासँग कहिल्यै नझुक्ने भएका करण पनि तामाङ समुदायको बाहुल्य भएको रसुवामा उनको उमेद्वारी अपरिहार्य देखिन्छ । कृष्ण बहादुर तामाङ ८२ प्रतिसत तामाङहरूलाई अध्याँरोबाट उज्यालो मार्ग प्रदान गर्न सफल हुनेछ भन्ने विगतका सामन्ती राज्य सत्ता माथिको विद्रोहले पनि बताउँछ । कहिल्यै पनि सामन्ती राज्य सत्ताको विचार मुनि झुक्न नजान्ने कृष्ण बहादुर तामाङ आफ्नो जातीय समुदाय माथि सामन्ती राज्य सत्ताले गर्ने गरेको सोषण, दमन, अन्याय र अत्याचारको बिरोधमा डटेर लागि पर्ने व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छ । आफ्नो पूर्खाहरूको योगदानलाई अत्यन्त सत्कार गर्ने कृष्ण बहादुर तामाङ समय समयमा सामन्ती राज्य सत्ताको आँखाको तारो समेत बन्नु भएको छ । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ नचाहने कृष्ण बहादुर तामाङ आफ्नो जाति र समुदायकै लागि राज्य सत्ताको नजरमा सधैँ तारो बनिरहनु परेको छ । जसले गर्दा २०७४ साल मंसिर १० गते हुने संघीय निर्वाचनमा रसुवा जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उमेद्वारी दिनुहुने नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम पार्टीका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष श्री कृष्ण बहादुर तामाङलाई नमस्कार छाप चुनाव चिन्हमा मतदान गरि जुझारू र सङ्घर्षशील तामाङ नेतृत्वको चयन गरौँ ।
आज सम्म ८२ प्रतिसत तामाङ समुदाय भएको स्थानमा केवल १५ प्रतिसत बाहुन/ छेत्रीहरूले तामाङ समुदायलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्दै आई रहेको छ । अब हामी तामाङ समुदायले यस्ता भोट बैंक बन्ने भन्दा पनि तामाङ आदिवासी समुदायको मौलिक हक र पहिचानका निम्ती पनि तामाङ समुदायकै नेतृत्व चयन गर्नु पर्ने हुन्छ । तामाङ समुदायको नलेखिएको इतिहास लेखाउन पनि हामी तामाङ समुदायले श्री कृष्ण बहादुर तामाङलाई आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गर्नु पर्ने देखिन्छ । तामाङ समुदायको रक्षा, तामाङ समुदायको इतिहासको खोजी गर्न र विश्वभर छरिएर बस्नु भएका तामाङ समुदायलाई एकीकृत गर्नका निम्ति श्री कृष्ण बहादुर तामाङको अमूल्य योगदान रहेकाले पनि २०७४ साल मंसिर १० गते हुने संघीय निर्वाचनमा उनको भूमिका तामाङ समुदायको लागि सुनौलो अवसरको रूपमा उदाएको छ । त्यसैले रसुवावासी तामाङ समुदाय अब हामीले हाम्रो सुनौलो अवसरलाई कीटको रूपमा प्रयोग नगरौँ । यो अवसर यसपाली गुम्यो भने ५ वर्षको लागि गुम्ने देखिन्छ । समय हुँदै आफू र आफ्नो समुदायलाई अगाडि बढाउँदै नमस्कार छाप चुनाव चिन्हमा मतदान गरि तामाङ समुदायको अस्तित्व रक्षक श्री कृष्ण बहादुर तामाङलाई विजय गरौ ।
आरदरणीय रसुवाबासी आमा, आपा, ज्योज्यो, आले, नाना आङा हामी २०७४ साल मंसिर १० गते हुने निर्वाचनमा तामाङ समुदायको उमेद्वार भएकोले नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम पार्टीको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष श्री कृष्ण बहादुर तामाङलाई आफ्नो अमुल्य मत दिएर प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजय गरौं । हामी तामाङ समुदायलाई लामो समय देखि शोषण गरेर हाम्रो उर्वर भूमि काठमाडौं हडपेर आज हामी तामाङ समुदायलाई अनकण्टार ठाउँमा पुर्‍याएको छ । यसको बदलामा हामी तामाङ समुदाय फेरि चुनावी र राजनीतिक धारमा एक हुन जरूरी छ । व्यक्तिगत रूपमा बुद्ध लामाले जितेको कुरामा जति खुशी छु त्यो भन्दा बढी तामाङ र सम्पूर्ण मंगोलहरू एक भएकोमा त्यति खुशी छु । तामाङ एकता र मंगोलहरूको एकता देख्दा खुशीको आँशु झरेको छ । वास्तावमा अब तामाङहरू राजनीतिक रूपले यसरी नै एक हुन जरूरी छ । सबै तामाङहरू एक भई राजनीति गर्नु पर्ने आवश्यक्ता खड्किएको छ । हाम्रो तामाङ समुदायको हितको निम्ति काम गर्ने तामाङलाई मतदान गर्नुहोस् र राज्य सत्ताको मूलधारमा पुर्‍याउनुहोस् । हाम्रो पूर्खाको पीडा बाहुन/छेत्रीहरूले बुझ्दैनन् त्यसैले पनि हामी तामाङले तामाङ समुदायको उमेद्वारलाई नै मतदान गर्न जरूरी छ । सम्पूर्ण तामाङ आमा आपा, ज्योज्यो आले र नाना आङाहरूलाई मेरो अनुरोध !।फुटेर हैन जुटेर ठूलो उपलब्धि हुने पाठ नेपाल आइडलले सिकाएको छ । त्यस्तै अब गीत सङ्गीतमा मात्र होइन रानजीतिमा पनि एक हुनु वा सबै तामाङ समुदाय जुट्नु अपरिहार्य देखेको छु् । उत्पीडन तामाङ समुदाय र वर्गको हितको लागि नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम पार्टीका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष श्री कृष्ण बहादुर तामाङलाई नमस्कार छाप चुनाव चिन्हमा आफ्नो अमुल्य मत दिनु भएर विजय गराउनु हुन समग्र रसुवावासी तामाङ समुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछु । थुजेछे ! !।